Finnair inotangisa isingamire Miami, Bangkok uye Phuket ndege kubva kuStockholm
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Finland Kuputsa Nhau » Finnair inotangisa isingamire Miami, Bangkok uye Phuket ndege kubva kuStockholm
Finnair inovhura nzira yekumira isingamire kubva kuArlanda, Stockholm kuenda kuBangkok nePhuket muThailand.
Finnair inovhura nzira yekumira isingamire kubva kuArlanda, Stockholm kuenda kuMiami kuUnited States.
Dzese nzira nhatu dzichashandiswa nendege yeAirbus A350.
Finnair inovhura nzira dzisingamire dzendege kubva kuArlanda, Stockholm muSweden kuenda kuBangkok nePhuket muThailand uye Miami muUnited States yenguva yechando 2021/2022. Dzese nzira nhatu dzichashandiswa nendege yeAirbus A350 inopa ruzivo rwakatsetseka uye rwazvino rwekufamba.
"Tiri kufara kusangana nezvinodiwa zvekufambisa zvevatengi vedu veSweden nebasa risingamire kubva kuArlanda kuenda kuThailand neMiami, ayo ari pakati penzvimbo dzepamusoro dzezororo dzechando kuSweden", anodaro Ole Orvér, Chief Commercial Officer, Finnair. "Ndege itsva dzichasimbisa kupa kwedu mumusika weSweden."
Kubva muna Gumiguru 22, Finnair inobhururuka kubva kuArlanda kuenda kuBangkok kashanu pasvondo paMuvhuro, Chipiri, China, Chishanu neSvondo. Kubva munaNovember 28, mafambiro evhiki nevhiki achawedzerwa kusvika manomwe uye ndege dzinoitwa kubva Muvhuro kusvika Svondo kusvika Kubvumbi 22, 2022.
Ndege kubva kuArlanda kuenda kuPhuket dzinozoitwa neSvondo kubva muna Gumiguru 24. Imwezve frequency ichawedzerwa China kubva munaNovember 4.th uye kweChipiri kubva munaNovember 30. Ndege dzinoenda kuPhuket dzinozoitwa kusvika Kubvumbi 21, 2022.
Ndege kubva kuArlanda kuenda kuMiami dzichatanga nemaviri evhiki, neChitatu neMugovera kubva muna Gumiguru 23. Kubva Mbudzi 29, ndege dzinozoitwa neMuvhuro neChishanu kusvika Kubvumbi 22, 2022.
Finnair inobhururuka ichienda kuBangkok, Phuket neMiami zvakare ichibva kumba kwayo Helsinki Airport.